लोहनी द्धारा लिखित पुस्तक “मैले बुझेको सृष्टि” विमोचित - Dhading Sanchar
धादिङबेसी , २५ भाद्र ।
लामो समय शिक्षण पेशामा आवद्ध रहनुभएका धादिङ जिल्ला ज्वालामुखी गाँउपालिका वडा नम्बर ७ निवासी लोकनाथ लोहनीद्वारा लिखित पुस्तक आज एक कार्यक्रमका बीच विमोचन गरिएको छ ।
जिल्ला समन्वयन समितिको हलमा भएको उक्त कार्यक्रममा साहित्यकार बद्री प्रसाद दाहालको सभापतित्व रहेको थियो । प्रमुख अतिथि जिल्ला समन्वयन समितिका प्रमुख जगन्नाथ नेपाल , विशिष्ट अतिथि धादिङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भागीरथ पाण्डे , निलकण्ठ नगरपालिकाका उप प्रमुख मनराज भण्डारी , धादिङ जिल्लाका प्रहरी प्रमुख डम्बर बहादुर वि.क. , जिल्ला समन्वयन समितिका उप प्रमुख विन्दा बराम , लगायत अन्यको आतिथ्यता रहेको थियो ।
पुस्तकको बारेमा डा. नवीन बन्धु पहाडी , राम प्रसाद अधिकारी र केशव दुवाडीले समीक्षा गर्दै ७० वर्षको उमेरमा पनि पुस्तक लेख्न सक्ने सामर्थ्य साहस र हिम्मत निकाल्नु ठुलो कुरा भएकाले उहाँको यो कदम प्रति सम्मान व्यक्त गर्नुभएको थियो ।
कार्यक्रममा प्र.जि.अ. भागीरथ पाण्डेले पुस्तकको बारेमा रचनात्मक सुझाब समेत दिनुभएको थियो भने प्रमुख अतिथि जि.स.स. का प्रमुख जगन्नाथ नेपालले शुभकामना व्यत्त गर्नुभएको थियो । कार्यक्रमको अन्तमा सभापति बद्री दाहालले साहित्य साधना गर्नका लागि उमेरले नछेक्ने र सुझावहरुलाई मनन गर्दै अगाडि बढ्न सुझाव गर्दै शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको थियो । धादिङ चैनपुरका लोहनीहरूको वंश परिचय समेत पुस्तकमा समावेश गरिएको छ ।
आवाज अभियान नेपाल द्वारा ७५ जना विद्यार्थीलाई छात्रबृत्ति वितरण
वलदेवी आधारभूत विद्यालयको भवन उद्घाटन